Fitsangatsanganana nosy ho an'ny mpizahatany sinoa amin'ny fitomboana maharitra
Home » Vaovao momba ny fizahantany » Fitsangatsanganana nosy ho an'ny mpizahatany sinoa amin'ny fitomboana maharitra
Ny fahitana toerana azon'ireo fitsangantsanganana amina nosy dia zava-dehibe satria hitan'ny mpizahatany fa misy toerana itodiana, ohatra ny any Azia atsimo atsinanana, izay sady manandanja no manana traikefa lehibe indrindra amin'ny fotoana iray ihany.
Hihatra amin'ny indostrian'ny fizahantany any Shina amin'ny fomba lehibe ve ny tsy fahazoana antoka makro mitohy? Ireo orinasan-dia efa miorina dia tsy miahiahy loatra amin'ity dingana ity. Raha ny marina, ny pie fizahan-tany ivelany dia mijanona ho iray amin'ireo fizarana manintona lehibe.
Anisan'ireo safidy fialan-tsasatra vahiny voafantina, ny vokatra fitsangatsanganana nosy dia mbola mitaky ny fangatahana, toy ny efa an-taonany maro. Ny haben'ny tsenan'ny dia amin'ny nosy dia mihoatra ny RMB100 miliara, ary ireo orinasam-pitaterana dia manantena ny hanana taham-pisondrotana isan-taona mahavariana amin'ny taona ho avy. Araka ny filazan'ny Chen Hua, Lehiben'ny Departemantan'ny Travel Outbound, CTS, dia mijery fitomboana 30% ny orinasa mandritra ny 2-3 taona ho avy.
Ny fihetseham-po toy izany dia azo omena antony maro. Ny iray amin'izy ireo dia ny fironana amin'ny fanavaozana ny fanjifana, izany hoe ny fanantenana manodidina ny vokatra avo lenta na iray amin'ny kalitao premium. Ary koa, ny mpitsidika dia tsy antenaina avy amin'ny tanàna ambaratonga voalohany sy faharoa ao Shina ihany, fa na dia avy amin'ny faritra ambany aza. Ny fidiram-bolan'ny mpizahatany sinoa, ny sidina iraisam-pirenena ary ny fizotran'ny fangatahana visa mora dia antenaina hitarika ny fitomboan'ny lazan'ny safidy fizahan-tany namboarina toy ny fitsangatsanganana nosy eo amin'ireo mpivahiny sinoa, hoy i Hua.
Araka ny natoron'i Hua, faritra iray tadiavin'ny indostria ny dia manokana. Ny fandalinana (ohatra, iray navoakan'ny Ctrip sy ny China Outbound Tourism Research Institute izay navoaka tamin'ity taona ity) dia nanasongadina ny fahaizan'ny mpampiasa vola sinoa rehefa miresaka fitsangantsanganana natao manokana. Ny olona dia mandany RMB 2500 isan'olona isan'andro amin'ny dia any Eropa ary matetika dia mandritra ny 12 andro ireo dia ireo. Ny fitsangatsanganana namboarina dia nipoitra tsimoramora ho hery hiadiana amin'ny fizahan-tany ivelany, indrindra ny fiheverana ny isan'ny mpanjifa antonony sy avo lenta ary ny fampitomboana ny fahefan'ny fandaniana. Voaporofo izao fa misokatra amin'ny fandaniam-bola bebe kokoa ny mpitsangatsangana amin'ny traikefa manokana eo an-toerana ary mampiseho ny fahaizany mitsangatsangana manokana sy mitety toerana manokana. “Ny fitsangatsanganana an-tsokosoko isan-karazany dia mampiseho ny mety ho fahombiazan'ny tsena. Fianakaviana maro no vonona hanatevin-daharana ireo fitsangatsanganana toa ireny, ny ankamaroany dia ny Arivo Taona ”, hoy i Hua.
Ary koa, raha ny amin'ny safidin'ny dia manokana no jerena, ny orinasam-pitetezam-paritany dia mijery ny fahatakarana ny fomba tian'ny mpanjifa mankafy ny dia. Ohatra, ho an'ireo toerana malaza toa an'i Bali, Phuket ary Boracay, dia marihina fa ny mpanjifa dia mankafy ny dia mitarika mitokana ho 50% raha toa ka 50% kosa ny fitsangatsanganana voaangona. Faritra iray hafa izay nanjary mahaliana ny làlan-kizorana dia ny traikefa miavaka izay tsy azo atao raha tsy mandeha mitsidika nosy. Mety ho fianarana dihy nentim-paharazana eny amoron-dranomasina na hetsika fitsangatsanganana an-dranomasina.
Fanandramana sarobidy-amin'ny-vola + lehibe
Ny fahitana toerana azon'ireo fitsangantsanganana toy izany dia zava-dehibe satria ny mpizahatany dia mahatsapa ny toeran-kaleha sasany ho vola be ary koa manana traikefa lehibe indrindra miaraka. Araka ny voalazan'i Hua, zava-dehibe ny pragmatika aloha raha ny miantoka ny fitsangantsanganana ataon'ny nosy. Ka mihoatra ny zava-misy toa ny fametrahana azy, miaraka amin'ny fomba fijery mahafinaritra na tantaram-pitiavana amoron-dranomasina, na hetsika sasany toy ny fanatanjahan-tena amin'ny rano, dia zava-dehibe ny mijery ireo faritra toa ny hahatongavana any. "Manome visa tsy misy visa na visa fahatongavan'ireo mpivahiny sinoa ny ankamaroan'ny toerana itodiana," hoy i Hua. “Ny nosy any Azia atsimo atsinanana dia mampiseho vola be. Ny toeran'ireo nosy premium sy lafo vidy dia tsara amin'ny lafiny rehetra, saingy somary lafo ihany, "hoy i Hua.
Ny vokatra fizahan-tany nosy CTS dia niavaka noho ny fanatontosana tanjona - Phuket, Bali, Nha Trang ary koa ClubMed. Ny ankamaroan'ireto vokatra ireto dia tolotra misy idiran'ny rehetra, hoy i Hua.
Raha ny zavatra andrasana dia antenaina fa ny mpitsangatsangana sinoa dia "azo antoka, mety, tsara tarehy amin'ny toerana misy azy ary manana fahombiazana avo lenta (sandan'ny vola) - ny vidin'ny vidiny", hoy i Hua. “Ny zotram-pitaterana iray dia misy sidina + fampiantranoana + fitaterana an-tseranana + visa + sakafo. Ny mpizahatany sinoa no malaza ny toeram-ponenana sy ny safidy sakafo. ”
Nandinika ny fironana, nizara i Hua:
• Manintona ireo mpivady vao manambady, toa an'i Maldives, ny fahitana any amin'ny nosy sy ny tontolo iainana.
• Ny fianakaviana manan-janaka dia tia ny nosy rehetra voaaro, toy ny ClubMed.
• Ary ireo mpitovo mpitovo toa ny toerana misy ny nosy misy lohahevitra, toy ny antsitrika ao amin'ny Nosy Bohol ao Filipina.
Raha ny amin'ny fiafarana avo kokoa an'ny vondrona fizahan-tany, Tahiti sy Seychelles dia mipoitra ho safidy manintona eo amin'ireo mpivahiny sinoa.
"Toerana avo lenta sy lafo vidy ny nosy dia mety amin'ny mpanjifa avo lenta," hoy i Hua.
Nampitandrina ihany koa i Hua fa ny sakana amin'ny fiteny dia mety ho faritra iray ahina ahiahy ary mila ifantohana. Faritra iray hafa izay afaka mandrisika ny fitetezana nosy ny fampidirana sidina mivantana iraisam-pirenena bebe kokoa hanamorana ny fidirana amin'ireo toerana itodiana ireo.
Airbus: fiaramanidina 43 no namandrika, 89 natolotra tamin'ny Novambra